Garsoore Sports – Page 5 – Hoyga Wararka Cayaaraha
Bartilmaameedka kooxda Barcelona Memphis Depay ayaa ishaaray inuu ka tagayo kooxdiisa Lyon marka uu dhammaado heshiiskiisa xagaaga – balse wuxuu farta ku fiiqay in cayaaryahanka ay isku kooxda yihiin ee reer Faransa…
Xiddiga garabka uga ciyaara Real Madrid Lucas Vazquez ayaa haatan dhageysanaya dalabyada uga imaanaya meelo kale kaddib markii wadahadalo qandaraas kordhin ah oo uu Real la lahaa uu gaaray meel xun. Vazquez,...
Jose Mourinho ayaa sheegay inuusan wali ‘diyaar u aheyn inuu ka hadlo’ kulankii Tottenham ay guuldarrada 2-1 ka soo gaartay Arsenal Axaddii. Mourinho ayaa lagu dhaleeceeyay qaab cayaareedka dhowaanahan ee kooxda Tottenham,...
Maxay Aheyd Hambalyada Zidane Udiray Ciyaartoyda Real Madrid?
Tababaraha Kooxda Real Madrid Zinedine Zidane ayaa Hambalyo udiray ciyaartoyda Kooxda sida lagu arkay Qoraalo ay Warbaahinta ka sameeyeen. Zidane ayaa Hambalyada uu soo diray ka dambeysay markii ay garaaceen Kooxda Atalanta kadibna usoo...
Klopp: ” Waan Jeclaan Lahaa Inaan Jarmalka Leyliyo Balse…”
Jurgen Klopp ayaa albaabka u furay inuu tababaro xulka qaranka Jarmalka mustaqbalka, laakiin wuxuu sheegay inuusan ka tagi karin waajibaadka haatan saaran ee leylinta Liverpool. Tababaraha Reds ayaa si aad ah loola...
Koox Dheesha Bundesliga Oo Tababarkii Maanta Covid19 Ubaajisey
Kooxda Kubada Cagta Cologne Ee Dheesha Bundesliga Jarmalka ayaa waxay maanta baajisey Qorshe ay Tababar ku qaadan lahaayeen Ciyaartoydeeda. Fc Cologne ayaa la sheegay in Shaqaalaheeda Qaar laga helay Caabuqa Covid19 sidaa awgeedna ay...
Milan & Napoli Oo Ku Dagaalamaya Laacib Katirsan Barcelona
Kooxda Ac Milan iyo Naadiga Napoli ayaa isku heysta laacib katirsan Kooxda Barcelona oo difaacyada ka mid ah. Xiddigaan Junior Firpo ayaa la isku dayey in la qaato Bishii Janaayo Sanadkaan Markii...
‘Buug Akhrista’ – Tuchel Oo Kululaaday Mar Wax Laga Weydiiyay Xaalada Timo Werner (Muxuu Ku Jawaabay?)
Tababaraha kooxda Chelsea Thomas Tuchel ayaa meesha ka saaray wararka xanta ah ee sheegaya in weeraryahanka dhibtoonaya ee Timo Werner uu doonayo inuu ka tago Stamford Bridge, isagoo difaacaya qaab ciyaareedka ciyaaryahankan...
Rio Ferdinand Oo Arinta Haaland Ee United Meel sare geeyey
Difaacii Hore Ee Kooxda Shayaadiinta Cas Rio Ferdinand ayaa codkiisa ku biiriyey in naadiga ay Keensadaan weeraryahanka cajiibka ah Erling Haaland. Gool ma waayaha Dalka Norwey Erling Haaland ayaa soo jiitay qaab...
Difaaca Chelsea Antonio Rudiger ayaa waxa uu ka hadlay Dalabyo uga yimid qaar ka mid ah Kooxaha Caanka ah ee Qaarada Yurub. Rudiger ayaa sheegay in xitaa ay lasoo xiriireen Jose Mourinho iyo Maamulka...
Zoran Mamic ayaa iska casilay shaqaddii leylinta kooxda Dinamo Zagreb kaddib markii lagu xukumay xabsi affar sano iyo siddeed bilood ah musuqmaasuq awgeed. Xukunka waxaa soo saaray Isniintii Maxkamadda Sare ee Croatia...